လိင်ကိစ္စပြုလုပ်နေစဉ် သေဆုံးမှု ကိုးခု အကြောင်း | Buzzy
လိင်ကိစ္စပြုလုပ်နေစဉ် သေဆုံးခဲ့ရမှု ကိုးခုအကြောင်းပါ ၊ သူတို့ ဘယ်လိုသေဆုံးခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး ။ တန်ဆေးလွန်ဘေးလို့ ဆင်ခြင်မိနိုင်ကြပါစေ....
1. Portuguese Woman
အသက် ၉၁ နှစ်အရွယ် ပေါ်တူဂီ အမျိုးသမီးကြီးဟာ သူမရဲ. ရင်ဖက်မှာ သူမအမျိုးသားရဲ. ဓါတ်ပုံ ဘေးမှာ sex toy တစ်ခု နဲ့ အတူ သူမရဲ. အိပ်ယာထက်မှာ သေဆုံးနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် ။ သူမရဲ. ရုပ်အလောင်းကို အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးက ရှာတွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူမဟာ sex toy အသုံးပြုရင်း သေဆုံးခဲ့ရတာပါ။
2. French President Felix Faure
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈၉၉ ခုနှစ်တုန်းက ပြင်သစ်သမ္မတ Felix Faure ဟာ လိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်နေတုန်း သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟလတွေ ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ကောလဟလတွေအရ သူဟာ သူ့မိန်းမနဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ ရှိနေစဉ် သူ့ရဲ.လက်တွေဟာ သူ့မိန်းမရဲ. ဆံပင်တွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ် ။ ပြောဆိုမှုတွေအရ သူတို့ဟာ oral sex ပြုလုပ်ရင်း သေဆုံးခဲ့ရတာပါတဲ့။
Charles နဲ့ Dorothy Mackenzie တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ သူတို့သမီးရဲ. မင်္ဂလာပွဲကို မက်ဆီကိုမှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ် ။ သူတို့လင်မယားဟာ ဇိမ်ခံရေနွေးကန်ထဲမှာ ချစ်တင်းနှောဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ သူတို့နှစ်ဦး မြူတူးပျော်ပါးနေတုန်းမှာပဲ Charles ဟာ heart attack ရခဲ့ပါတယ် ။ သူရဲ. သေဆုံးနေတဲ့ ခန္တာကိုယ်ကို Dorothy က ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ရေအောက်မှာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ၊ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ နှစ်ယောက်စလုံး သေဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ။
4. Nazi Hanging
လိင်မှုကိစ္စကို ထူးထူးခြားခြားနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ နာကျင်ထိခိုက်လောက်အောင် အရူးအမူး လုပ်ဆောင်တက်သူတွေ အမှန်ပဲရှိပါတယ်။ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူရဲ. ကာလရှည်ကြာစွာ တွဲလာခဲ့တဲ့ ရည်းစားကို နာဇီလို ဝတ်ဆင်ပြီး သူ့ကိုနှိပ်စက် ဆက်ဆံစေခဲ့ပါတယ် ။ ကြိုးဆွဲချပုံစံမျိုး ပြုလုပ်ကာ သူမကို ဓါးတစ်ချောင်းပေးပြီး ကြိုးကို ဖြတ်တောက်စေခဲ့ပေမယ့်လည်း သူဟာ အသက်ရှုကျပ်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။
5. Fatal Threesome
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ရုရှားအမျိုးသား တစ်ဦးဟာ သုံးယောက်တွဲ နေပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ် ။ Sergey Tuganoc အမည်ရှိ ဒီအမျိုးသားဟာ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနဲ့ နေ့တစ်ဝက်လုံး နေခဲ့ပြီး သူဟာ Viagra တွေ သောက်ပြီး ဆက်လက်နေဖို့ ကြိုးစားတာမို့ heart attack နဲ့ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဆန်ဖရန်စ္စကိုမှာ ရှိတဲ့ Condor Club ဟာ ပထမဆုံးသော အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ bar အဖြစ်နဲ့ နာမည်ကြီးလှပါတယ် ။ ဒီဘားရဲ. စန္ဒရားခုံမှာ bouncer ဟာ သူ့ရဲ. ချစ်သူနဲ့ ချစ်မှုပြုနေတုန်း စန္ဒရားခုံ ကျိုးပျက်ပြီး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
7. Underwater Sex
Anita Harold နဲ့ Richard Lang တို့ဟာ ကားထဲမှာ ဆက်ဆံမှုပြုဖို့ နေရာကောင်းတစ်ခုကို ရှာခဲ့ပြီး သူတို့ဟာ မြစ်ကမ်းနားမှာ ကားကိုရပ်နားခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီနောက်မှာတော့ သူတို့ရဲ. လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ကားဟာ စတင်ရွေ.လျားလာပြီး မြစ်ထဲကို ထိုးကျသွားခဲ့ရပါတယ် ။ သူတို့နှစ်ဦးဟာလည်း.....
8. Balcony Love
Robert Salazar နဲ့ Sandra Orellana တို့ နှစ်ဦးမှာ အမျိုးသားဟာ အလုပ်တွေများနေခဲ့ပြီး စီးပွားရေးခရီးကနေ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ။ မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ အလွန်အကျူး သည်းသည်းမည်းမည်း ချစ်မှုပြုရင်း လသာဆောင်ကနေ ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
9. Nelson Rockefeller
vice president ဟောင်း Nelson Rockefeller ဟာ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တုန်းက သူရဲ. အတွင်းရေးမှုးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင်း heart attack ဖြစ်ကာ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိပါတယ် ။ အဲ့တုန်းက သူ့အတွင်းရေးမှုးမလေးဟာ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ. နောက်ဆုံးသော သာယာမှု ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ သေဆုံးခဲ့ရတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။